I-Lightroom CC entsha isekwe ngokupheleleyo kwilifu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ilifu lokudala linjalo Elinye lawona maqonga entlawulo agqityiweyo akhoyo ngenyanga kubaqulunqi. Ineentlobo ngeentlobo zeenkqubo zazo zonke iintlobo kwaye ukuba minyaka yonke bahlaziya ngeendaba ezinomdla kakhulu. Ezi zinto zintsha zihlala zinika abayili amaphiko kwindalo yabo entsha.
Kunamhlanje xa iAdobe inayo Ityhile uhlaziyo olukhulu lwezixhobo zayo zokuhlela ifoto ye-Lightoom CC. Kuza ujongano olutsha, ukuhamba komsebenzi, kunye nokugxila okubekwe kakuhle kuhlelo olusekwe kwilifu. Uthotho lweendaba esidlula kuzo ukuze sizazi iindaba zakho ezilungileyo.
Kuya kufuneka kwakhona sibe nenkonzo entsha yokufota, eyayisaziwa njengeProjekthi yeNimbus, yona kakhulu ngoku kugxilwe ekubekweni kwezicwangciso ezenziwa kwilifu lokuyila ngokubhekisele ekufotweni.
I-Lightroom CC entsha dlala ujongano olutsha kunye noluhlu lwezixhobo ezitsha esivumela ukuba siziphathe ngendlela elula ngenkqubo. Ezo zixhobo zine-Adobe Sensei, itekhnoloji yokufunda ngomatshini yokukhangela amagama aphambili, kunye nombutho wemifanekiso ongcono.
Ngokubhekisele kwilifu, I-Lightroom CC ngoku ivumela abasebenzisi ukuba bakwazi ukuhlela nokuvumelanisa imifanekiso ngesisombululo esipheleleyo kwii -apps zakho ze-desktop, kwizixhobo eziphathwayo ze-Apple, nakwiwebhu. Olu nxibelelaniso lufikelela kwiifoto zeRAW.
Kulo Inguqulelo ye-iOS ye-Lightroom CC entsha, Uphando lweSensei, inkxaso yeefayile ze-iOS 11 kunye nonxibelelwano oluphuculweyo kwi-iPad nazo ziyafumaneka. Kungenxa yoko le nto, ukuba usisixhobo esinokuchukumisa ngakumbi kunye nohlobo oluhlaziyiweyo lwangaphambili, ekuye kwabizwa ngokuba yiLightroom Classic CC.
I-Lightroom CC kunye ne-Lightroom Classic CC ngoku lixabiso le-12,09 euro ngenyanga, nangona ungafikelela kwi-1TB endaweni ye-20GB, ngexabiso le-24,19 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-Adobe ikhupha iGumbi lokuKhanyisa elitsha CC NgokuPheleleyo ngokusisiseko kwilifu
Ukuhla kwamanzi ngeFotohop